merolagani - मंगलबार पनि सुनचाँदीको भाउ बढ्यो, कतिमा हुँदैछ कारोबार ?
मंगलबार पनि सुनचाँदीको भाउ बढ्यो, कतिमा हुँदैछ कारोबार ?
Sep 15, 2020 12:48 PM Merolagani
भदौ ३० गते,मंगलबार सुन तथा चाँदीको भाउ बढेको छ । यस दिन सुन तोलामा ६०० रुपैयाँले बढेर छापावाला सुन प्रतितोला ९७ हजार ५०० रुपैयाँ र तेजाबी सुन प्रतितोला ९७ हजार रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको नेपाल सुन चाँदी व्यवसायी महसंघले जनाएको छ ।
अघिल्लो दिन सोमबार पनि सुन तोलामा ४०० बढेर प्रतितोला ९६ हजार ९०० रुपैयाँ तोकिएको थियो ।
यसैगरी मंगलबार चाँदी पनि तोलामा २० रुपैयाँले वृद्धि भई प्रतितोला एक हजार ३४० रुपैयाँमा खरिदबिक्री भइरहेको छ ।
अन्तरराष्ट्रिय बजारमा पनि मंगलबार सुनचाँदीको भाउ बढेको छ । यस दिन सुन सो बजारमा ११ डलर भन्दा बढि वृद्धि भई प्रति अउन्स एक हजार ९६८ डलरमा किनबेच भइरहेको छ । त्यसैगरी चाँदी पनि प्रति अउन्स २७ डलर भन्दा बढिमा कारोबार भइराखेको छ ।